Yosua 15 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yuda agyapade (1-12)
Kaleb babea nyaa asaase (13-19)
Yuda nkurow (20-63)
15 Asaase a wɔbɔɔ ntonto de maa+ Yuda abusuakuw mu mmusua no, ɔhye no kɔfa Edom,+ Sina sare so, kosi Negeb anaafo. 2 Wɔn hye a ɛda anaafo no fi Nkyene Po* no ano noho,+ efi baabi a ɛpo no didi kɔ asaase mu a ani kyerɛ anaafo fam no. 3 Ɛkɔfa anaafo fam kɔ Akrabim koko+ so kosi Sina, na efi anaafo foro kɔfa Kades-Barnea+ twam kɔ Hesron, foro kɔfa Adar kɔntɔn kɔ Karka. 4 Afei etwam kɔ Asmon+ kɔfa Egypt Subon+ no ho, na ɔhye no ano kɔpem Ɛpo no.* Eyi ne wɔn hye a ɛda anaafo fam no. 5 Wɔn hye a ɛda apuei no nam Nkyene Po* no ano de kosi Yordan agya. Na atifi fam hye no fi baabi a ɛpo no didi kɔ asaase mu wɔ Yordan agya no.+ 6 Ɔhye no foro kɔfa Bet-Hogla+ twam kɔ Bet-Araba+ atifi, na ɛforo kɔ Ruben ba Bohan bo+ no ho. 7 Ɔhye no foro kɔfa Debir wɔ Akor Bon+ no mu,* na ɛdan kɔ atifi kodu Gilgal+ a ɛda Adumim koko anim wɔ subon no anaafo. Na ɔhye no twam kɔfa En-Semes+ nsu no ho kɔpem En-Rogel.+ 8 Ɔhye no foro kɔfa Hinom Ba Bon*+ no ano kosi Yebusi+ koko no nkyɛnmu wɔ anaafo, kyerɛ sɛ, Yerusalem.+ Na bepɔw a ani kyerɛ Hinom Bon no atɔe fam wɔ Refaim Bon no atifi fam tɔnn no, ɔhye no foro kɔ n’atifi. 9 Ɔhye no fi bepɔw no atifi kɔ Neftoa asuti ho,+ na efi hɔ kɔfa nkurow a ɛwɔ Efron Bepɔw so no ho; na ɛtoa so kɔ Baala, kyerɛ sɛ, Kiriat-Yearim.+ 10 Ɔhye no kɔntɔn fi Baala wɔ atɔe kɔfa Seir Bepɔw ho, na ɛkɔ atifi fam kɔfa Yearim Bepɔw ho, kyerɛ sɛ, Kesalon; na esian kɔfa Bet-Semes+ kɔ Timna.+ 11 Ɔhye no kɔfa Ekron+ koko no nkyɛnmu wɔ atifi fam, na efi hɔ kɔ Sikeron twam kɔ Baala Bepɔw ho, na efi hɔ kɔ Yabneel; ɔhye no kɔpem ɛpo no ano. 12 Atɔe fam hye no ne Ɛpo Kɛse* no mpoano.+ Eyi ne Yuda asefo hye ano nyinaa, sɛnea wɔn mmusua te. 13 Yefune ba Kaleb+ de, ɔmaa no asaase wɔ Yuda asefo mu sɛnea Yehowa ka kyerɛɛ Yosua no; ɛno ne Kiriat-Arba (ná Arba yɛ Anak agya). Saa kurow yi ara ne Hebron.+ 14 Na Kaleb tuu Anak mma+ baasa no fii hɔ, Sesai ne Ahiman ne Talmai,+ Anak asefo. 15 Ofi hɔ foro kɔɔ Debirfo so.+ (Kan no, na wɔfrɛ Debir sɛ Kiriat-Sefer.) 16 Afei Kaleb kae sɛ: “Ɔbarima a obetumi ako afa Kiriat-Sefer no, mede me babea Aksa bɛma no aware.” 17 Ɛnna Kaleb nua Kenas+ ba Otniel+ kɔko fae. Enti Kaleb de ne babea Aksa+ maa no waree. 18 Bere a Aksa rekɔ fie no, otutu guu ne kunu asom sɛ ommisa asaase mfi ne papa hɔ. Ɛnna Aksa si fii n’afurum no so.* Na Kaleb bisaa no sɛ: “Ɛdɛn na wopɛ?”+ 19 Na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Mepa wo kyɛw, hyira me. Woadi kan ama me asaase wɔ anaafo.* Fa Gulot-Maim* nso ma me ɛ.” Enti ɔde Gulot Atifi ne Gulot Anaafo maa no. 20 Eyi ne agyapade a wɔde maa Yuda abusuakuw no sɛnea wɔn mmusua te. 21 Yuda abusuakuw no nkurow a ɛda anaafo fam a ɛbɛn Edom hye so+ pɛɛ no ne: Kabseel, Eder, Yagua, 22 Kina, Dimona, Adada, 23 Kedes, Hasor, Yitnan, 24 Sif, Telem, Bealot, 25 Hasor-Hadata, ne Keriot-Hesron, kyerɛ sɛ, Hasor, 26 Amam, Sema, Molada,+ 27 Hasar-Gada, Hesmon, Bet-Pelet,+ 28 Hasar-Sual, Beer-Seba,+ Bisiotia, 29 Baala, Yim, Esem, 30 Eltolad, Kesil, Horma,+ 31 Siklag,+ Madmana, Sansana, 32 Lebaot, Silhim, Ain, ne Rimon;+ nkurow 29 ne ɛho nkuraa. 33 Sefela+ nso, nkurow a na ɛwɔ hɔ ne: Estaol, Sora,+ Asnah, 34 Sanoa, En-Ganim, Tapua, Enam, 35 Yamut, Adulam,+ Soko, Aseka,+ 36 Saaraim,+ Aditaim, ne Gedera, ne Gederotaim;* nkurow 14 ne ɛho nkuraa. 37 Senan, Hadasa, Migdal-Gad, 38 Dilean, Mispe, Yokteel, 39 Lakis,+ Boskat, Eglon, 40 Kabon, Lamam, Kitlis, 41 Gederot, Bet-Dagon, Naama, ne Makeda;+ nkurow 16 ne ɛho nkuraa. 42 Libna,+ Eter, Asan,+ 43 Yifta, Asnah, Nesib, 44 Keila, Aksib, ne Maresa; nkurow akron ne ɛho nkuraa. 45 Ekron ne ɛho nkurow ne nkuraa; 46 efi Ekron kɔ atɔe fam nsaase a ɛwɔ Asdod ne ɛho nkuraa nyinaa. 47 Asdod+ ne ɛho nkurow ne nkuraa; Gasa+ ne ɛho nkurow ne nkuraa, de kosi Egypt Subon no, ne Ɛpo Kɛse* no, ne ɛho mantam nyinaa.+ 48 Na bepɔw so nkurow Samir, Yatir,+ Soko, 49 Dana, Kiriat-Sanna, kyerɛ sɛ, Debir, 50 Anab, Estemo,+ Anim, 51 Gosen,+ Holon, Gilo;+ nkurow 11 ne ɛho nkuraa. 52 Arab, Duma, Esan, 53 Yanim, Bet-Tapua, Afeka, 54 Humta, Kiriat-Arba, kyerɛ sɛ, Hebron,+ ne Sior; nkurow akron ne ɛho nkuraa. 55 Maon,+ Karmel, Sif,+ Yuta, 56 Yesreel, Yokdeam, Sanoa, 57 Kain, Gibea, ne Timna;+ nkurow du ne ɛho nkuraa. 58 Halhul, Bet-Sur, Gedor, 59 Maarat, Bet-Anot, ne Eltekon; nkurow asia ne ɛho nkuraa. 60 Kiriat-Baal, kyerɛ sɛ, Kiriat-Yearim,+ ne Raba; nkurow abien ne ɛho nkuraa. 61 Sare so nkurow nso ne: Bet-Araba,+ Midin, Sekaka, 62 Nibsan, Nkyene Kurow, ne En-Gedi;+ nkurow asia ne ɛho nkuraa. 63 Na Yebusifo+ a na wɔte Yerusalem+ no de, Yudafo no antumi antu wɔn amfi hɔ;+ na Yebusifo ne Yudafo tenaa Yerusalem de besi nnɛ.
^ Anaa “Asaasetraa.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Aksa bɔɔ ne nsam bere a ɔte afurum no so no.”
^ Anaa “Negeb.”
^ Ɛkyerɛ, “Asɛn (Nkankyee) a Nsu Wom.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Gedera ne ne nguammuw.”